Google weputara API CameraX ohuru maka ndi mmepe | Gam akporosis
Google mere ọtụtụ ọkwa, gụnyere ndị mwepụta nke Pixel 3a y A gam akporo Q na mmeghe mmeghe nke Google I / O 2019. E mekwara ka ọtụtụ ndị API ọhụrụ na nkwalite ndị metụtara ngwanrọ ndị ọzọ na ndị mmepe.
Onye kasị pụta ìhè, ma eleghị anya, bụ CameraX, API ọhụrụ emere iji melite ngwa igwefoto na gam akporo. Nke a na-arụ ọrụ na ọtụtụ gam akporo ngwaọrụ na mfe iji mmejuputa iwu na ndakọrịta na gam akporo 5.0 ma ọ bụ ngwaọrụ dị elu.
Ndị mmepe nwere ike iji igwefotoX mee ngwa igwefoto ọhụrụ ọhụụ, yana ntinye nhọrọ na mgbakwunye na mgbakwunye ọ gụnyere. Na ntughari, ha nwere ike ịmasị ahụmịhe igwefoto nke ngwa igwefoto etinyegoro na ngwaọrụ ọ bụla. Ndị a kwesịrị ịgbakwunye ọnụọgụ abụọ nke koodu iji kpalite atụmatụ niile nke ngwa igwefoto nke ala. Were foto na eserese, HDR, abalị na ịma mma.
Ọ dị mfe iji API na ọ ga adi adi koodu na-atọ ndị ọzọ gam akporo igwefoto ngwa. Ọrụ na-ewe oge iji depụta maka ngwaọrụ ọ bụla akọwapụtara na ngwa igwefoto ga-agwụ. Google ewepụtala ụlọ nyocha CameraX raara onwe ya nye iji nyochaa nkwalite n'ofe sistemụ arụmọrụ niile na-amalite site na Android 5.0 Lollipop.
Google emeela ya na gburugburu ebe obibi nkwụnye na-egwu iji weghara omume igwefoto dị mfe. Usoro nke usoro dị iche iche, dị ka Preview, Analysis Image, na Capture Image, bụ akụkụ nke API kachasị ọhụrụ.
Ihe ohuru API di ugbua na ogbo Alpha, Google na-atụ aro ka ị ghara iji ya maka ebe a na-emepụta ihe. Agbanyeghị, Google na-akwalite iji ya maka ebumnuche ule.
IgwefotoX doro anya na ọ ga - abara ndị mmepe mmepe maka ngwa igwefoto gam akporo. Ọ ga - eduga na ngwa igwefoto kachasị kachasị na kachasị mma yana ndakọrịta na isi ọrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » CameraX bụ API ọhụrụ nke Google maka ndị mmepe na - eme ka ihe dị mfe